Kianja Vontovorona: lavon’ny Cnaps Sport, 3 no ho 1, ny FC Vakinankaratra | NewsMada
Kianja Vontovorona: lavon’ny Cnaps Sport, 3 no ho 1, ny FC Vakinankaratra
Tsara fanombohana ny Cnaps Sport Itasy, teo amin’ny lalao voalohany natrehiny eo amin’ny fiadiana ny “Poule des As”. Resiny, tamin’ny isa mazava 3 no ho 1, ny FC Vakinankaratra. Fihaonana, notanterahina omaly alahady, teny amin’ny kianja Vontovorona. Mbola noporofoin’ny Cnaps Sport indray fa mpanjaka eo amin’ny kianjany ry zareo.
Na izany aza, sahirana ny Cnaps Sport teo amin’ny fizaram-potoana voalohany satria ry zareo Vakinà no nitarika anisa. Baolina tafiditr’i Ricky, teo amin’ny minitra faha-38, taorian’ny “corner” azon’izy ireo.
Nanova paikady kosa ny Cnaps Sport teo amin’ny fidirana faharoa. Nitondra ny fanafihany, tany amin’ireo elatra roa, havia sy havanana. Sesilany ny fanafihan’izy ireo, nanempotra ny vodilaharan’ny FC Vakinankaratra. Nanasahala ny isa i Niasexe, teo amin’ny minitra faha-62, rehefa nahazo tolotra tsara avy amin’i Lalaina. Tsy nijanona teo fa mbola nampian’i Bora indray io baolina tafiditry ny Cnaps Sport io, tany amin’ny minitra faha-69. Nitady irika hanasahalana ny baolina ihany ny ekipan’Antsirabe, saingy tsy nahavita fanafihana tena natahorana. Nampiditra ny baolina fahatelo ny Cnaps Sport, tany amin’ny minitra faha-85, tamin’ny alalan’i Tolotra.